Raha avy ny orana, dia ireo felatanana roa ireo no manelanelana ny arabe mando sy misy rano ao ambaniny, sy ny fiara, ka raha malama amin'ny rano na fotaka ny lalana dia mbola ireo felatanana roa ireo ihany no miady irery ao ambany ao.
Ny hilazana izany, dia aza atao an-tsirambina ny kodiaran'ny fiara, satria raha tsara io kodiarana io, mamikitra tsara amin'ny arabe fa tsy sola, dia mamikitra mivohy sy manosika ny fiara milanja 2 taonina tsara ny felatananao roa, raha misy ny ilana ny fijanonana tampoka dia mbola ireo felatanana roa ireo ihany koa no hamikitra amin'ny arabe ampijanona azy.
Mila mahay misafidy ireo kodiarana tsara sy mifanentana amin'ny fiara sy ny lanja ho entiny izany, mila jerena matetika ny rivotra ao anatiny na ny gonflage, satria raha be loatra ny velarana mikasika amin'ny tany dia mandany kodiarana, mandany solika satria be loatra ny faritra manohitra ny lalana, raha be loatra indray ny rivotra, dia kely loatra ny velarana mikasika amin'ny tany ka tsy mandroso ny fiara, ary kely loatra ny hampijanonana ny fiara raha manitsaka hisatra.
Lasa toy ny baolina baskety mitontona ny kodiarana raha be rivotra loatra, aza adino fa ny rivotra anaty kodiarana no miasa manao amortissement voalohany amin'ny lalana, izay vao ny amortisseur n'ny fiara, izay manosika ny kodiarana hipetaka lalandava amin'ny arabe fa tsy hitsingevana na hiainga hiala lalana, ary mihazona ny vatan'ny fiara tsy hitsamboamboatra hietsika firy raha misy fitanilana na misy lavadavaka ny lalana.
Eto amintsika dia ireo kodiarana efa sola sy tsy ekena any ivelany intsony, no alefa amidy aty, na ilay pneu bonne occ (pneu occasion), izany hoe efa ilay gomme malama sisa no ao, ilay pneu efa tsy misy nifiny, amoaka ny rano ety ivelan'ny kodiarana ka tsy hampisy rano eo anelanelan'ny arabe sy ny kodiarana, hialana amin'ny aquaplaning, izany hoe io rano io, dia lasa toy ny vato mafy ao ambany kodiarana, ka dia hikorisa fotsiny ny fiara, hitatsika ireny vato fisaka atoraka andranomasina ireny dia mikapokapoka mitsingevana eny ambony rano, na ny kibontsika maharary raha mitsoraka ambony piscine ka tsy ny loha no lasa aloha fa mipetaka amin'ny rano ny kibo.
Misy faritra ahafantarana ny fahalanian'ny kodiara, temoin d'usure, misy hoditra kely na gomme izay anelanelan'ilay nifinifiny iny, ka rehefa mitovy amin'iny gomme na repère na temoin d'usure iny izany ilay nifiny, dia kodiarana efa lany tsy tokony ampiasaina intsony izy izany. Ilay gomme ao ambany iny dia efa malemy, ka raha tatahana ny antsy anamboarana nifinifiny dia mety hitera-doza.
Ny eto amintsika moa, na ny toeram-pitsarana fiarakodia aza, dia jerena maso avokoa ireo singa amin'ny fiara, tsy misy akory ny fitaovam-pitsarana toy ny banc de freinage, banc d'essai d'amortisseur, tsy misy pont élévateur mba hijerena ny ao ambany fiara, na ny jeu de roulement, sy ny jeu de biellette na ny pivot, tsy misy fijerena ny taux de pollution sy ny échappement, fa dia jerena setroka fotsiny, ny train avant efa misy hipitika ny kodiarana, ny jiro atao tomba-maso ny haavony amin'ireo centre de contrôle technique maro.
Ny aratsian-dalana moa efa tsy lazaina intsony manimba aingana ny fiara, na ny carrosserie, na ny kodiarana, na ny frein na ny motera. Ny piesy, dia piesy sandoka sy mora simba ny maro, tsy misy fanaraha-maso avy amin'ny mpitondra, fa dia avela hiditra avokoa ireo fakon'olona tsy tiany rehetra any.
Tafiditra anatin'ny fandriam-pahalemana na sécurité routière avokoa izany.
Fotoana izao hanomezana io asa fitsarana fiara io an'ireo matihanina, ka esorina amin'ny mpitandro filaminana. Azo fohanana tsara ny kolikoly amin'io amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia, izay azo ampifandraisina amin'ny Kaompania mpiantoka fiara, ny centre immatriculateur...
Marihina fa ny 70% n'ny lozam-pifamoivoizana mamono sy mampisy takaitra indrindra, dia ny lozam-pifamoivoizana an-drenivohitra, izay fiara mandeha mora latsaky ny 30km/h, ka fahadisoan-kevitra ny milaza hoe rehefa mandeha mora dia tsy maninona na fiara toy ny sarety aza no entina.
Tsy latsa-danja amin'izany ny fanaovana fatorana, na ceinture de sécurité, anaty fiara, tsara tadidy fa ny olona iray milanja 70kg, dia raha mijanona tampoka ny fiara mandeha 50km/h, dia toy ny milanja 2 tonnes rehefa atsipin'ny fiara amin'ny fitaratra, na amin'ny seza aoriana.
Ny fifandonana amin'ny afangainam-pandeha 50km/h dia toa ny olona nilatsaka avy eny amin'ny rihina fahatelo, 3ème étage, ary raha nandeha 100km/h ny fiara dia toa ny nianjera avy eny amin'ny 12ème étage.